Rajmarga Fm – Page3– Radio RajMarga 92.1 MHz
Archives by: Rajmarga Fm
Rajmarga Fm Posts
प्रदेश ३ को स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स र दमकल खरिद गर्न रकम निकासा
By Rajmarga Fm
हेटौंडा । स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स, दमकल, शववहान खरिद गर्नका लागि प्रदेश–३ सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशमा रहेका एकसय १९ वटा स्थानीय तह मध्ये ४७ वटालाई रकम ...
महादेववेशी । थाक्रे ६ र ४ को सिमाना माटिखोलामा पुल (कल्भर्ट) को संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. १ धादिङका सांसद भुमि प्रसाद त्रिपाठीद्वारा शिलान्यास गरिएको छ । महादेवबेसी-रातमाटे-आग्रा-मनहरी सडक ...
Highway National News
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले नाफा राखेर इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल र ...
डीएसपी ढुंगेल निलम्बित
रौतहट । रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमुद ढुंगेल निलम्बित भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरी नायव उपरीक्षक ढुंगेललाई निलम्बन ...
थाक्रेमा रहेको जनजागृती माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मीत भवन उद्घाटन
महादेववेशी । धादिङको थाक्रे ६ महादेववेशीमा रहेको जनजागृती माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मीत भवनको उद्घाटन गरिएको छ । बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत सँघिय साँसद भुमि त्रिपाठीले नवनिर्मित ४ कोठे ...
धार्के । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गल्छि ६ बेल्खुमा भएको दुर्घटनामा २ जना भएको छ । काठमाण्डौँ तर्फ आउँदै गरेको बा ९७ प २५३८ नम्बरको मोटरसाईकल, काठमाण्डौँबाट नवलपरासी ...
बैरनीमा भएको कार्यक्रम मार्फत ५१ जनाद्धारा रक्तदान
बैरेनी । धादिङको गल्छि ६ बैरेनीमा भएको रक्तदान कार्यक्रम मार्फत ५१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । गल्छी गाउँपालिकाको आयोजना तथा नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा र बैरेनी उपशाखाको ...
प्रेम सागर फाउण्डेशनका महासचिव न्यौपानेको तेह्रौँ दिनको पुण्य तिथीमा श्रद्धांजली कार्यक्रम
तसर्पु । प्रेम सागर फाउण्डेशनका महासचिव डोरनाथ न्यौपानेको तेह्रौँ दिनको पुण्य तिथीमा श्रद्धाण्जली कार्यक्रम गरिएको छ । धादिङको थाक्रे दामेचौरमा रहेको प्रेमसागर फाउण्डेशनमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्वर्गिय न्यौपानेमाथी ...
धादिङको गल्छीमा करदाता सेवा कार्यालय सन्चालन
गल्छि । धादिङको गल्छी गाउँपालीका स्थित गल्छिमा कर दाता सेवा कार्यालय स्थापना भई सन्चालन भैरहेको छ । धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा विभिन्न ब्यवसाय गरेर बस्नेहरुका लागी कर तिर्न ...
कुन रंगको गुलाबको अर्थ के हो ?
बैशाख १४ । गुलाबको फूललाई पे्रमको प्रतिक रुपमा लिइन्छ। गुलाब मन नपर्ने मानिसहरु शायदै भेटिएलान् । चोहे कुनै सजावटका लागि होस् वा अन्य कुनै कार्यका लागि गुलाब विभिन्न ...